जुआ भित्र स्वीडेन दैनिक जीवनको धेरै भाग हो। एक स्थानीय पट्टी प्रविष्ट गर्नुहोस् वा फेरीमा छोटो क्रूज पनि लिनुहोस् र तपाईं स्लट मेसिनको केहि क्रममा आउन बाध्य हुनुहुन्छ वा ब्लेक खेल हुनसक्छ यो तथ्य यो छ कि दुबै भूमि र अनलाइन क्यासिनो देश भित्र वैधानिक छन्। ईंट र मोर्टार क्यासिनो वास्तवमा स्वीडेनमा १ 1992 10 २ मा पेश गरिएको थियो जबकि स्विडेनी अनलाइन क्यासिनोहरूले १० बर्ष पछि २००२ मा बजार प्रवेश गरेका थिए।
जनवरी सम्म, स्वीडेनमा सञ्चालित सबै क्यासिनो साइटहरूको एक देश विशिष्ट इजाजतपत्र हुनु आवश्यक छ, अर्थात् स्विडेनी गेमिंग इजाजतपत्र। चीजहरू निश्चित रूपमा विशाल रूपमा कडा भएका छन्, तर बजार पहिले भन्दा बढी फस्टाइरहेको छ। केवल यो के हो जसले स्विडेनमा अनलाइन क्यासिनोहरूलाई यत्ति पेचीला बनाउँदछ? क्यासिनो बोनसबाट खेलहरू साथै भुक्तान विधिहरू र समग्र सुरक्षा, हामी सबै प्रकट गर्दै छौं। सर्वप्रथम सब कुरा, यहाँ स्विडेनमा सर्वश्रेष्ठ अनलाइन क्यासिनोहरूको हाम्रो सूची छ।
शीर्ष १० स्वीडिश अनलाइन क्यासिनो साइटहरू एक नयाँ बोनसको साथ!
शीर्ष १० स्वीडिश अनलाइन क्यासिनो साइटहरू एक विशाल बोनसको साथ!
स्वीडिश अनलाइन क्यासिनो नियमन
यो वर्षले स्विडेन क्यासिनो बजारलाई अनलाइन जुवाको सन्दर्भमा पुनः नियमनसँग जोड्यो। यो कुनै गोप्य कुरा थिएन कि स्विडेनी सरकारले "नियम पुस्तक" लाई चिह्न गरिरहेको छ, कुरा गर्न को लागी। यो कुनै पनि अवस्थित अनलाइन क्यासिनोलाई हानी गर्नका लागि होइन, तर स्विडेनी खेलाडीहरू बीच जुवा खेल्ने रोक्न बचाउन र मद्दतको लागि गरिएको हो।
नयाँ नियमले जिम्मेवार जुवामा सजगता बढाउँछ र अपरेटरहरूलाई खेलाडीले छनौट गर्नु अघि प्रत्येक पदोन्नती र बोनसको सर्तहरू स्पष्ट रूपमा दर्साउँदछ। यसले स्विडिश सरकारलाई सबै जुवा संचालनमा १ revenue% कर राजस्व आय लगाउन पनि अनुमति दिन्छ। पैसा स्विडेनी नागरिकहरु।
नयाँ स्विडेनी जुवा नियमन कुनै नयाँ कुरा छैन किनकि यस्तै अन्य कानूनहरू अन्य यूरोपीय देशहरूमा अवस्थित छन्। स्पेन, डेनमार्क, इटाली र संयुक्त राज्य सबै स्विडेनले जुवा विज्ञापन सम्बन्धी कडा दिशानिर्देश लागू गर्न र खेलाडीहरुलाई जुवाको नकरात्मक नतिजाबाट जोगाउनको शर्तमा लागू गरेका छन्। यहाँ क्यासिनो टोप्स अनलाइनमा हामी कुप्रभावहरू सहँदैनौं र सधैं हाम्रो खेलाडीलाई सुरक्षा र निष्पक्षताको मामलामा पहिले राख्छौं।
स्विडेनी क्यासिनो नियमन
स्वीडिश गेम्बलि R्ग विनियोजन समझाईयो
जनवरी १ का दिन मिति भनेको नयाँ स्विडेनी जुवा ऐन लागू भयो र अनलाइन क्यासिनो रातारात देखिन्छ। एक अपरेटर (एक अनलाइन क्यासिनो) को रूपमा, अब तपाईं स्पेल इन्स्पेक्शनन (स्वीडिश जुआ प्राधिकरण) मार्फत इजाजत पत्रको लागि आवेदन दिन आवश्यक छ, स्विडेनी खेलाडीहरूलाई जुवा समाधानको लागि प्रदान गर्न।
स्विडेनी जुवा ऐन प्रत्यक्ष हुनु भन्दा पहिले, यो स्वीडिश खेलाडीहरूको लागि अपरेटरहरूको लागि सबैको लागि निःशुल्क हो, सबै कुराको अनुमति थियो जसले केवल झूटा प्रतिज्ञाहरू र देखिन्छ देखिन्छ निर्दोष बोनस मा उच्च दांव आवश्यकता।
नयाँ स्विडेस जुवा नियमनको ठाउँमा, यसले अपरेटरलाई स्विडेनी जुवा प्राधिकरणले स्वीकृति दिएको मान्य इजाजतपत्र बिना स्वीडिशका बासिन्दाहरूलाई जुवा सेवाहरू प्रदान गर्न पूर्ण रूपमा अवैध बनाउँछ। यस पृष्ठमा हामी केवल अनलाइन क्यासिनोहरूको सूचि बनाउँदछौं जुन स्विडेनी इजाजतपत्रको स्वामित्वमा छ। जहाँसम्म, तपाई यस पृष्ठमा सूचीबद्ध नभएको एक अनलाइन क्यासिनो भेट्न आउनुहुन्छ भने, यो अत्यन्त महत्त्वको छ कि तिनीहरूले क्यासिनोमा स्विडेनी इजाजतपत्र छ कि छैन भनेर जाँच गर्नुहोस्।
स्विडेनमा सर्वश्रेष्ठ अनलाइन क्यासिनो
अन्य यूरोपीय देशहरू जस्तै, स्विडेनमा पनि उत्सुक जुवा खेल्नेहरू फौज हो। केवल चिट्ठा मात्र होईन, तर खेल सट्टेबाजी र क्यासिनो खेल पनि लोकप्रिय छ। तर विविधता खोज्दा, स्विडेनी जुवा खेलाडीहरू प्राय: विदेशी क्यासिनोहरू खोज्छन्, किनकि देशमा जूवा खेल्ने प्रतिबन्ध र स्विडेनी सरकारले गरिरहेको खेल गतिविधिहरूमा एकाधिकार रहेको छ। स्विडेनी आधारित पन्टर्स सक्रिय रूपमा खेल गतिविधिहरु मा संलग्न, र साथै खेल शर्त मा अनुमान गरीन्छ। पोकर अनलाइन खेलेको प्रख्यात छ। अनलाइन पोकरको लोकप्रियता तथ्यबाट स्पष्ट हुन्छ कि हालसालै एक अनलाइन पोकर टर्बो च्याम्पियनशिप एक स्विडेनी जुवा खेलाडीले जितेको थियो। स्मार्टफोन र ट्याब्लेटहरूको बढ्दो संख्याको साथ, जूवामा रुचि निरन्तर बढ्दै गएको छ, किनकि स्विडेनीहरूले मोबाइल उपकरण जुवाको पनि आनन्द लिन सक्दछन्।
स्विडेनमा जूवामा एकाधिकार
जुवा, दुवै इट्टा र मोर्टार ठाउँमा र अनलाइन, स्विडेनमा कानुनी हो। तर जुवा गतिविधिहरू संचालन गर्ने अपरेटर्ससँग विशेष इजाजतपत्र हुनुपर्दछ। वास्तवमा, एक इजाजतपत्र को एक मात्र मालिक Svenska Spel हो। त्यो राज्यको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी हो र बिंगो हल र इन्टरनेटमा सक्रिय छ।
जुवाको सम्बन्धमा स्विडेनमा कानून
हालको कानून जसले एकाधिकारलाई समर्थन गर्छ प्रतिस्पर्धा नियमहरूसँग पत्राचार गर्दैन जुन ईयुमा स्वीकृत हुन्छ। अर्कोतर्फ युरोपियन न्याय अदालतले उक्त कानूनको पक्षमा फैसला भनेको अपरेटर्सबाट जुवा खेलाडीहरूको संरक्षणको अनुमोदनमा आधारित छ जसले अवैध खेलका अवसरहरू संचालन गर्दछ।
२००२ मा, देशका लोटरी ऐनमा परिवर्तनले स्वेन्स्का स्पेललाई अधिक व्यापक अनलाइन बजार प्रदान गर्नका साथै पोकर, बिंगो, स्क्र्याचकार्डहरू समावेश गर्न मद्दत पुर्‍यायो। क्यासिनो हेम्स पनि च्याउ र लोकप्रियता मा धेरै वृद्धि भयो।
ईयूले २०० 2007 मा औपचारिक माग स्वीडेन र केही अन्य देशहरूलाई ती देशहरूमा जुवा बजार खोल्न र यसरी सेवाहरूको स्वतन्त्र आवागमन सक्षम पार्न अनुरोध गरेको सफलतासाथ पूरा भएन। सेभेन्स्का स्पेलको एकाधिकार जारी रह्यो।
२०१२ मा, सरकारको एक हिस्साले स्विडेनमा अनलाइन जुवामा बढी प्रतिस्पर्धाको लागि सर्तहरू प्रदान गर्ने, र अन्तर्राष्ट्रिय अपरेटरहरूलाई पनि लाइसेन्स प्रदान गर्ने इरादा व्यक्त गर्‍यो। तर प्रक्रिया ढिलो छ, र सरकारले २०१ 2012 मा सेभेन्स्का स्पेलको एकाधिकारलाई संरक्षण गर्न कुनै इरादा नभएको घोषणा गरेपछि यो स्पष्ट भयो कि निकट भविष्यमा पनि परिवर्तनको आशा गर्न सकिदैन। यसैबीच, स्विडेनीहरू विदेशी क्यासिनो अपरेटरहरूले उनीहरूको खेल स online्ख्या अनलाइन विस्तार गर्न जुवा खेल्ने अवसरहरूको फाइदा लिन उत्सुक छन्।
बोनस र स्विडेनी खेलाडीहरु को लागी पदोन्नतिहरु
हामीले अहिले सम्म उल्लेख गरेका सबै पक्कै पनि तपाईंको प्राथमिकतालाई आधार बनाउने राम्रो आधार हो, तर त्यसो गर्नु अघि तपाईंले हामीलाई यस बजारमा सबै भन्दा राम्रो बोनस र पदोन्नतीहरूको बारेमा एक शब्द साझा गर्न अनुमति दिनुहुन्छ। त्यसोभए, तपाईं कसरी बोनस गर्नुहुन्छ? सबै भन्दा राम्रो र सबैभन्दा ठूलो सम्झौता हो र सधैं स्वागत बोनस हुनेछ। त्यस कारणका लागि, साइनअप बोनस धेरै खेलाडीहरूको लागि अभिन्न अंग हो र स्वाभाविक रूपमा मुख्यधारको जुवाको केन्द्र बिन्दु बन्छ। त्यहाँ केहि गलत छैन, यो तर्क गर्न सकिन्छ कि त्यहाँ उत्तम दृष्टिकोण हो। थप विज्ञापन बिना नै, यहाँ स्वीडनमा आधारित प्लेयरहरूको लागि हाल नै उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ स्वागत प्रस्तावहरू छन्।
शीर्ष १० स्विडेनी अनलाइन क्यासिनो साइटहरू अपडेट गरिएको: जुन 1, 2020 लेखक: Damon
1 शीर्ष १० स्वीडिश अनलाइन क्यासिनो साइटहरू एक नयाँ बोनसको साथ!
1.1 शीर्ष १० स्वीडिश अनलाइन क्यासिनो साइटहरू एक विशाल बोनसको साथ!
2 स्वीडिश अनलाइन क्यासिनो नियमन
3 स्विडेनी क्यासिनो नियमन
4 स्विडेनमा जूवामा एकाधिकार
4.1 जुवाको सम्बन्धमा स्विडेनमा कानून
5 बोनस र स्विडेनी खेलाडीहरु को लागी पदोन्नतिहरु
शीर्ष १० स्विडेनी अनलाइन ...